ငါကိုယ်တိုင် စိတ်လိုလက်ရ ခေါင်းခွေ့တိုးဝင်...။
ရစ်ဖွဲ့တတ်သော သံယောဇဉ် နွံနက်နက်တွေထဲ
ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်နဲ့ မိတ်ကပ်ဖို့နေရတဲ့ မျက်နာတွေကြားထဲ
အမြီးကို မလုံမလဲ ဖွက်ထားတတ်တဲ့ လူနာမည် လိပ်စာ တပ်ထားသူတွေကြားထဲ
ရိုးလွန်းလို့ အ ဘဝမှာ စည်းစိမ်မှုအရ အနှုတ်လက္ခဏာပြနေတဲ့ လူမွဲချမ်းသာတွေအထဲ...
ဆင်းရဲနဲ့ ငရဲကြား ဘဝကို အလျားလိုက် တက်မဲ့လှော်ခတ်နေကြတဲ့ ညဉ့်ငှက်လေးတွေအထဲ....
အပင်မြင့်မြင့်တွေ့တိုင်း ခုတ်ချင် ပိုင်းချင် အမြစ်ကလှဲချင်သော မုဒိတာပါးလျသူတွေကြားထဲ
ထိုးတတ်သောလက်ညှိုး ပြစ်တင်းဖွဲ့ဆိုတတ်သော မျက်လုံးတစုံစီရှိကြသော အမနာပတွေကြားထဲ
အရိုးရင့် အရေထူဖို့ ခပ်နာနာ အထောင်းခံကြရ...။
ကရွတ်ခွေသံသရာ အဝိုင်းကြီးထဲ....အစရှိခဲ့ပြီး အဆုံးသိနေလည်း...
Cameron Sat Apr 23, 12:59:00 PM GMT+8
ဒီပုံလေးကိုသိတယ်......မကြီးပြန်လာတုန်းက ရွှေရည်မှာ ညီမလေးတို့ လက်ဘက်ရည်သောက်တုန်း မကြီးပြခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံလေးလေ...မိုက်တယ်...။ စာတွေကိုလဲ သိပ်ကြိုက်တယ်...။ စကားလုံးတွေက ထိမိပါပေ့...။
Anonymous Sat Apr 23, 02:13:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Sat Apr 23, 02:18:00 PM GMT+8
အင်း ဒီလိုနဲ့ တနှစ်တနှစ် ပြီးသွားလိုက်တာ
မောင်မျိုး Sat Apr 23, 04:40:00 PM GMT+8
ရစ်ပတ်တတ်မှန်းသိပေမယ့် တိုးဖြစ်အောင်တိူးပြီး ရုန်းထွက်ဖို့ခက်နေတယ်း)
အဆင်ပြေပါစေ အစ်မရေ ။
ညီမလေး Sat Apr 23, 04:45:00 PM GMT+8
ဒါပေမဲ့ တခါတခါတော့လည်း ရုန်းထွက်ချင်တယ် ချစ်ချစ်ရယ်...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Apr 24, 02:24:00 AM GMT+8
အစ်မရေ.. သိတဲ့အတိုင်း အလုပ်တွေရှုပ် စိတ်တွေမအားမို့ ခုမှလာနိုင်တယ်.။ အားလုံးဖတ်ပြီးသွားပြီ။ ခံစားချက်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာသဘောပေါက် နားလည်မိပါတယ်။ ရင်ဘတ်ချင်း တူကြသူတွေ မဟုတ်လား။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Apr 24, 02:26:00 AM GMT+8
ကိုယ်ဖန်တီင်္းမှုကို ကိုယ်တိုင်က တန်ဖိုးအထားရဆုံးပါဘဲလေ။
ခုပိုစ့်လေးက ပုံလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် အောက်ကစာနဲ့
လောကီရုန်းမဲ့ဘုန်းကျောက် Sun Apr 24, 07:12:00 AM GMT+8
Mon Petit Avatar Sun Apr 24, 07:02:00 PM GMT+8
"ကရွတ်ခွေသံသရာ အဝိုင်းကြီးထဲ....အစရှိခဲ့ပြီး အဆုံးသိနေလည်း...
လမ်းလွှဲမသွားနိူင်သေးသမျှတော့....ဘယ်တုန်းကမှ မရုန်းမိပါဘူး.....။" အဲဒိ နောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ မမ။
တီချမ်း Sun Apr 24, 07:40:00 PM GMT+8
ကွန် ကို ကွမ် လို့ပေါင်းပြီး ဒီလိုရေးကြည်မယ် .....
မလှမပ ဝိုးတိုးဝါးတား ဓါတ်ပုံများကြားထဲ
အခုတလော အမ ခံစားချက်တွေများနေပုံရတယ်
အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ စိတ်တွေ လျော့......
Myo Mon Apr 25, 11:55:00 AM GMT+8
First to comment here.
I think you wereareligious lady.
Now you are just busy with meaningless things.
I like Ko Gyi Kyauk's comment.
An Asian Tour Operator Mon Apr 25, 02:32:00 PM GMT+8